PetrPikora.com on Janoary 19, 2018
Ny sisa tavela amin'ny Trosky Castle dia eo an-tampon'ilay tendrombohitra antsoina hoe 488 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina, ao amin'ny tanànan'i Troskovice ao amin'ny distrikan'i Semily Liberecký. Izy io dia an'ny fanjakana (tantanin'ny National Monument Institute) ary afaka manatona ny vahoaka.
Debris dia tandindon'ny Paradisa Bohemianina ary iray amin'ireo trano fialokalofana maro be tany amin'ny Repoblika Tseky. Ao amin'ny ampahany ambony amin'ny havoana dia ny faritra voaaro amin'ny Trosky voajanahary voajanahary. Ny tampony no toerana avo indrindra ao amin'ny Vyskeřská Highlands. Ny haavon'ny tendrony avo indrindra amin'ny lapa (Virgin Tower) dia metatra 514. Tao amin'ny 1928, Trosky dia lasa fananan'ny Czech Tourists Club.
Ao 2000 dia naorina teo ambanin'ny lapa tily tilikambo Panna amin'ny faran'ny taloha mbola tsy vita tohatra sy vaovao fahafahana miditra tohatra naorina ny fijerena sehatra an-tampon'ny tilikambo Baba mamela Panoramika jerena ny rehetra manodidina sy ny mahaliana jerena ny faharoa tilikambo Panna.
Taorian'ny nahafatesan'i Cenek ny Wartenberg, ny mpanorina ny trano mimanda, trano mimanda Mpanjaka Wenceslas IV. Taona 1398 nahazo trano mimanda sy ny Estates manontolo Mpanjaka Otto ny Berg sy rehefa nandova ny vakin'ilay sambo ny zanaky ny mitovy anarana - Ota tanora. Izy, tahaka ny Katolika nafana fo, nahasarika ny fahatezeran'ny Hussite miaramila izay tao 1424 Trosky fahirano. Anati-rova Paoly, na izany aza, dia tsy naharesy. Ao 1455, zanak'i Otto Berg, Jan, nivarotra Trosky Manor rehetra tompon'ny trano mimanda akaiky toetrany sy taolana, izay Jan Zajic ny Hazmburk. Fa Trosky fa midika Raha jerena ankapobeny ny faran'ny fiainana mavitrika iray.
Potipoti-javatra taona 1469 no resin'ny tafika mpanjaka. Anati-rova Paoly irery no lasa foiben'ny fitantanana ara-toekarena ary na dia niova tanana imbetsaka. Na dia nandritra ny Ady Telopolo Taona ny lapa dia, na dia nandao sy derelict. Momba ny fomba tena nijery ny lapa tamin'ny fotoana ny piandohany, loharanom-baovao dia mangina. Maty tsy misy sary hoso-doko na ny sokitra, archival fitaovana rehetra may. Avy amin'ny loharanom-baovao dia fantatra fa ny hany sary tena ara-tantara ny Trosky azony ny Swedes nandritra ny Ady Telopolo Taona ny lapa vatolampy Gross ka nitondra azy ho any Soeda. Ao amin'ny 1821 Wallenstein Trosky nivarotra an'i Jan Lex avy any Aehrentalu. Alois zanany no nanomboka tao 1841 hanao tohatra miolakolaka, izay te-ho ny tampon'isa ny Virjiny, ka manararaotra ny fanantenana ao amin'ny faritra manodidina. Ao amin'ny 1843 fa maty marika sy trano ary dia mbola mbola tsy vita.
Ao amin'ny 1928 Trosky lasa ny tany momba ny Czech Tourist Club. Ao amin'ny 2000 lapa naorina ambanin'ny tilikambo Panna manantena any amin'ny faran'ny taloha mbola tsy vita tohatra avy aehrentalské vanim-potoana ary vao naorina fidirana tohatra sy mijery sehatra an-tampon'ny tilikambo Baba mamela Panoramika jerena ny rehetra manodidina sy ny mahaliana jerena ny faharoa tilikambo Panna. Ny lapa ankehitriny ny tany momba ny fanjakana sy ny angoninay ny harem-pirenena Institute ao Prague --paritra Specialist Office in Liberec.
HagCzech Paradisadjs mandehadji mavicDJ phantomĐi Phantom 4drônadrônahradkvadroptéralitchiVirgophantomphantom 3phantom 4mandroso phantomFiposahan'ny masoandromasoandro modyvakin'ilay samboFiposahan'ny masoandroavy any ambonymasoandro mody